Isampulu 001: Inkqubo yokuSebenza kweMigangatho yeKhamera (WOP) -Izisombululo ze-OMG
Ikhamera eyamkelweyo yomzimba
isihloko: Inkqubo yeKhamera eSebenzayo yeKhamera yeWall-Worn
Isihloko: Ukusetyenziswa kweekhamera zeVidiyo yeWall-Worn Video ngamapolisa aseNSW
Inkqubo yokhuseleko: NGQINILE
Umhla wokupapashwa: IXX / XX / XXX
Inombolo yangoku yohlobo: Inguqulelo yokugqibela XX
Umhla woqwalaselo: 1 Julayi 2019
Isiteyitimenti sokushicilela: Ilungelo lokushicilela kolu xwebhu ligxothiwe kwi-XXXXX © XXXX
Uhlobo # Idatha yokuvunywa yoguquleloe Ugunyaziso IXESHA / Isishwankathelo seenguqu
1.6 25 Agasti 2017 I-XXXXXXXX Uyilo lwee-SOP
2.2 I-XX XXX XXX CET Inguqulelo yokugqibela
Injongo yalo mgaqo-nkqubo kukuseka isikhokelo sokusetyenziswa, ukulawulwa, ukugcinwa nokubuyiswa kwengxelo egciniweyo kwinkqubo yecandelo lekhamera (BWC) yesebe. Ii-BWC ziya kusetyenziselwa ukuxhasa uthumo lwesebe kunye nokuncedisa igosa lesebe ekwenzeni imisebenzi yalo ngokunikezela ukurekhodwa okuchanekileyo nangokungagungqiyo kwintsebenzo phakathi kweGosa noluntu.
Lo mgaqo-nkqubo usebenza kuwo onke amalungu anikwe i-BWC, kwaye nawaphi na amalungu, abasebenzi abaphandayo, kunye nabasebenzi abaxhasayo abanoxanduva lokulungisa amatyala okutshutshiswa kolwaphulo-mthetho kunye nokukhutshwa kweerekhodi zoluntu.
I-BWC ixhasa imisebenzi yokusebenza kwamapolisa. Ziyakusetyenziswa apho igosa likholelwa ukuba kufanelekile ukurekhoda iziganeko ezenzekayo okanye imeko abasebenza kuyo. Iikhamera ziya kulxhasa igosa lophando ngokurekhoda ubungqina obukhoyo kunye nobaphulaphuli besi sigameko okanye ulwaphulo-mthetho.
Ukusetyenziswa kwe-BWC kuya kuba yinto ethile, kwaye iikhamera ziya kunxiba ngeyunifomu / yeengubo zamagosa ngendlela engaphezulu. Uluntu luzakucetyiswa ukuba ziyarekhodwa ukuba kunokwenzeka ukwenza njalo ngaphambi okanye ngexesha lokuvula ukurekhoda. Ukuba akunakwenzeka ukwenza oko ngaphambili okanye ngelo xesha, ngokukhawuleza kunokwenzeka emva kokuvula ukurekhoda.
Ukubhalwa kweenyawo kunokusetyenziswa kuphela phantsi kweemeko ezithile njengoko kumiselwe ngumthetho okanye phantsi kommiselo owenziwe phantsi komthetho. Ukuba igosa lisilele ukurekhoda into ehambelana noku, banokucelwa ukuba bacacisele umphathi ukuba bazokuphendula kwisigqibo sabo.
Umxholo we-BWC uya kugcinwa ngokukhuselekileyo, ugcinwe kwaye ulahliwe.
Imigaqo emihlanu yesikhokelo ibonelela ngesiseko sokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwe-BWC ngamagosa.
Isixhobo seCamera-Worn Camera siya kusetyenziswa liGosa ekwenzeni imisebenzi yabo ngokusemthethweni. Igosa liya kusebenzisa ukugweba kwabo xa lithatha isigqibo sokuyisebenzisa kwaye ukusetyenziswa kwayo kuya kubonakala kwaye kube ngaphezulu.
2. Ikhamera ye-Worn-Worn iya kusetyenziswa ligosa ukurekhoda iziganeko, izehlo kunye nobungqina. Kuya kubakho iimeko ezithile apho iCamera-Worn Camera ingafanele isetyenziswe kunye namaxesha athile xa ukusetyenziswa kwayo kungafanelekanga.
3. Ikhamera eyaziwa njenge-Worn-Worn Camera iyazixhasa iindlela eziqhelekileyo zokuqokelelwa kobungqina; ayithathi indawo yazo.
Ukurekhodwa kweKhamera ye-body-Worn kuya kwenziwa ngenkqubo ngokukhuselekileyo kuze kulawulwe ngokuhambelana nomthetho, imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo ezifanelekileyo.
5. IGosa liya kubonelela ngolwazi ngokubanzi eluntwini malunga nokusetyenziswa kweKhamera yeWall-Worn Camera ngabo.
2. Ikhamera yeWall-Worn-Esebenzayo Izikhokelo
2.1 Uvavanyo lwaphambi kokutshintsha
Ngaphambi kwentshukumo nganye, amagosa abelwe i-BWC aya kuqinisekisa ukuba iyunithi ihlawuliswa ngokufanelekileyo. Ukongeza, amagosa aya kuhlola ikhamera yawo ukuqinisekisa ukuba akukho monakalo ubonakalayo kwaye isixhobo sikwisimo esihle sokusebenza. Nawuphi na umonakalo obonakalayo okanye inkxalabo malunga nokusebenza kwezixhobo ziya kwaziswa kuthathelwa ingqalelo ngumphathi wakho okwilungu ngokukhawuleza ukuba kube njalo ukwenza oko.
Inkqubo nganye ye-BWC iya kusetyenziselwa ukubhala iziganeko ezahlukeneyo ezenzeka ngexesha lokutshintsha kwegosa elabelweyo. Ukugqitywa kokutshintsha kwegosa elinikezelweyo, yonke idatha efakiweyo iya kugcinwa kwindawo yokugcina okukhuselekileyo. Xa zifakiwe, ezirekhodiweyo zikhuselwe ngephasiwedi kwaye azinakuguqulwa.
Itekhnoloji ye-BWC iququzelela iinjongo zesebe zokuqokelela ubungqina bokutshutshiswa, ukuqinisekiswa kokubini kwamapolisa kunye nokuphendula, ukuqhuba imisebenzi yokuhlola, nokunikezela ngoncedo oluxabisekileyo loqeqesho ngokuvumela uvavanyo lwegosa kunye nokuziphatha kwabahlali.
I-BWC inokusetyenziswa ligosa elinxibe iyunifomu, kodwa naluphi na usetyenziso kufuneka lugqithisile kwaye kukwenza umsebenzi ngokusemthethweni. Ukusetyenziswa ngokugqithileyo kubhekisele kusetyenziso lwesixhobo se-BWC ngendlela enokuthi ibonwe kwaye ichongwe njengesixhobo sokurekhoda ividiyo kunye nevidiyo. Esi sixhobo siza kunxitywa ukuze siqwalaselwe kwaye singafihli, sifihlwe okanye sifihlwe. Amagosa aya kuthi, xa kunokwenzeka, azise kubantu abathetha nabo ukuba incoko yabo irekhodwa yi-BWC inxitywa ligosa.
Nawaphi na amagosa kwiingubo ezicacileyo akufuneki ayisebenzise i-BWC. Onke amagosa enxibe iyunifomu yawo, ngelixa esenza imisebenzi yempendulo yokusebenza, kufuneka athwale njengenxalenye yomfaniswano wawo ne-BWC ukuze isetyenziswe ngokuhambelana nezi SOPs. Igosa elibandakanyekayo kunye / okanye imisebenzi yophando kufuneka lithathe kwaye lisebenzise i-BWC ukuxhasa imisebenzi yabo yobupolisa.
2.3 Ukusetyenziswa kweGosa leKhamera yeWall Worn - Ulwazi ngokubanzi
Igosa alizukucelwa ukuba lirekhode lonke utshintsho lwabo okanye lonke unxibelelwano olwenzekayo ngelixa besemsebenzini. Ukurekhodwa kwe-BWC kufuneka kungqamane nesiganeko (nokuba ukurekhodwa ekugqibeleni kuyafuneka ukuze kusetyenziswe njengobungqina). Amagosa ane-BWC aya kwenza konke okusemandleni ukwenza i-BWC yabo kubo bonke abaphandi bophando okanye abanyanzelekileyo kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho:
1. Ukuhamba kwezithuthi
2. Uphando lomqhubi olungalunganga
3. Udliwanondlebe kunye neendawo zokuhamba zabahamba ngeenyawo
4. Ukuhambisa abemi okanye amabanjwa
5. Ukukhangelwa kwabantu okanye iipropathi
6. Iifowuni ezihanjisiweyo zenkonzo
7. Imiboniso yolwaphulo-mthetho
8. Imeko ezaphukileyo (inokuthi icinywe ukuba ilungu lilinde itrakhi kwaye akukho manyathelo ongezelelweyo anokwenzeka)
9. Iingxelo / udliwanondlebe neengqina okanye ubungqina
10. Ukulandela izithuthi kunye neenyawo
11. Ukuphendula okungxamisekileyo kwizigameko ezinzima
Nje ukuba i-BWC irekhodishe, amalungu kufuneka aqhubeke nokurekhoda de kube kugqityiwe umsitho okanye bade bawushiye umnyhadala kunye nokuzibandakanya kwabo kumsitho kuphele.
Ngelixa akufuneki ngumgaqo-nkqubo okanye umthetho wombuso, amagosa anikwe i-BWC angakufumanisa kuluncedo ukwazisa amanye amaqela ukuba arekhodwe. Oku kungqineke kunempembelelo kulungelelaniso lwentsebenzo yezifundo kwaye kubonisiwe ukunciphisa izehlo zokusetyenziswa kwamandla.
Ukugcina imigaqo-siseko yesebe yokuhlonipha kunye nentembeko, amagosa abelwe i-BWC aya kulandela ngqo le migaqo:
1. Ii-BWC's aziyi kwenziwa zisebenze kwindawo apho kulindelwe ubukho babucala, njengamagumbi okunxiba, amagumbi okutshixa kunye nezindlu zangasese. Nakuphi na ukurekhodwa okunenjongo okanye ngempazamo okwenziwe phantsi kwezi meko kungasuswa ngaphambi kwexesha eliqhelekileyo lokugcinwa kweentsuku ezisi-7 ngumphathi wegosa.
2. Ii-BWC's aziyi kusetyenziselwa ukurekhoda ukukhangela komzimba, ezivunyelwe kuphela esibhedlele okanye zonyango. Ii-BWC ziya kusetyenziselwa ukurekhoda ukukhangela okwenziwe ngamagosa ebaleni (umzekelo, ukwehla kwezithuthi, ukukhangelwa kwezithuthi).
3. Ii-BWC's aziyi kwenziwa ngenjongo ukuba zirekhode incoko yabanye amagosa ngaphandle kolwazi lwabo ngexesha lezinto ezenziwa rhoqo kunye nemisebenzi enganyanzelisiyo. Oku kubandakanya ngelixa igosa likwikhefu lokuphumla, ngelixa kunikwa ingxelo ngokubhala, ukuya kwiifowuni eziphathwayo, kwiingxoxo ngokubanzi namanye amagosa, lixoxa ngelinye icala nelinye igosa, okanye lisenza eminye imisebenzi yolawulo.
Ii-BWC's azisayi kusetyenziswa ukurekhoda iingxoxo zoluntu kunye / okanye amanye amagosa esebe.
5. Amalungu asebenzisa i-BWC akasayi kubhala irekhodi lamagosa angabhaliswanga okanye ulwazi oluyimfihlo.
6. Ii-BWC's azisayi kusetyenziswa ukurekhoda nawuphi na umsebenzi okanye umsebenzi wabucala.
2.5: Izichaso kwiRekhodi
Amapolisa anokuyeka ukurekhoda ukuba akholelwa ukuba kukho izizathu ezinyanzelekileyo zokwenza njalo. Ezi zizathu kufuneka zibekwe kwirekhodi levidiyo ngaphambi kokuba irekhodi limisiwe.
2.6 UkuLayisha i-Worn Camera Footage
Ekupheleni kwenguqu buyisela i-BWC kwisikhululo sedokodo apho ukulayisha kuya kuqala ngokuzenzekelayo. Amagqabantshintshi aya kuhlala ehlala kumncedisi wendawo de abe 'umakishwe' ngumsebenzisi njengesiqulatho seo
ngexabiso lobungqina, okt: ubukho bendawo busenokuhambelana nophando, inkqubo yoluleko, ibango elisemthethweni okanye isikhalazo. Umxholo ongamakiwanga uthathwa njengongangqinelaniyo kwaye uyakuhlala ungacacanga kwiseva lendawo ixesha elingangenyanga, apho uya kuthi ucinywe ngokuzenzekelayo.
Ukubhalwa kwe-BWC / umxholo kunokumakishwa phantsi kwamacandelo amathathu (3):
2. WHS (Umsebenzi, Impilo & Nokhuseleko) -Ukusetyenziselwa kuphela apho umxholo ungamakwwanga njengobungqina kwaye inxulumene nomsebenzi, impilo kunye nokhuseleko olunokuthi lube semdla
3. Isikhalazo - isetyenziselwa kuphela apho umxholo ungamakwwanga njengobungqina kwaye kuphela apho igosa likholelwa ukuba ukugcina loo mboniso kunokunceda kuphando.
2.7 Sebenzisa i-Video-Worn Video Footage
Ukuba umfanekiso wegosa ubukhona, okanye uburekhodwe yi-BWC, kwaye elo gosa linenkxalabo malunga nokukhutshwa komfanekiso walo (umz: enikezwe njengenxalenye yesishwankathelo sobungqina), kufuneka bacebise
I-OIC yetyala ukuba bafuna ukuba umfanekiso wabo uphinde uphinde ukhutshwe ngaphambi kokuba ukhululwe.
Sukusebenzisa, ukunxibelelana okanye ukupapasha umxholo we-BWC ngaphandle kokuba uwela ngaphakathi kokusetyenziswa okugunyazisiweyo, njengoku:
• kwinkundla yamatyala olwaphulo mthetho
Ukubuza kunye nemibuzo ngemeko yokuziphatha
• apho impahla ichazwayo kwinkundla evulekileyo okanye apho impahla ingene khona kuluntu
Brief Ukulungiselela ngokufutshane / ingxelo, okanye icebiso malunga nokuba ukutshutshiswa kuqalisiwe kwaye kuliphi ityala
• Uphando lwezikhalazo kubandakanya ukonganyelwa yiKhomishini yokuZiphatha koMthetho
• Unxulumene noqeqesho kunye nemfundo yeGosa
• ukunxulunyaniswa nokusebenza komthetho ligosa
• uphando lwezehlo ezinobuzaza
Ungakhupheli, usebenzise okanye uxele izinto ze-BWC ngeenjongo ezingezizo ezaseburhulumenteni, ezifana nokubonisa kuye nawuphi na umntu ongagunyaziswanga okanye ukuba nesabelo kumajelo eendaba ezentlalo. Kwiimeko ezithile, kunokuba semthethweni ukukhupha i-BWC kwi-media yeendaba ngegunya.
Ikopi epheleleyo ye-BWC yonyawo, okanye uhlobo oluhleliweyo lwenkundla, ukhuselo notshutshiso lunokwenziwa. Imifanekiso evela kwishicileli ingabanjwa njengeefoto zokusetyenziswa njengobungqina kunye
funa ukuthotyelwa kwemiThetho yoLwaphulo-mthetho (iNkqubo ye-Forensic). Iikopi ze-BWC zemidlalo yokuveliswa kwenkundla zingenziwa ngeendlela ezininzi zevidiyo kubandakanya iDVD. Ngamanye amaxesha, ukuhlela ngokwezifiso kunokufuneka kumxholo we-BWC.
2.8 Ukujonga i-Video-Worn Video Footage-Umntu otyholwa / uMmeli osemthethweni
Apho umxholo we-BWC uza kusetyenziswa ukuxhasa isimangalo okanye inkqubo yezomthetho, igosa linganika umtyholwa, kunye / okanye nommeli wabo wasemthethweni, ithuba lokujonga umxholo we-BWC. Oku kuya kunikezelwa ngaphambi komhla wokukhankanywa kwinkundla yokuqala kunye / okanye ngaphambi kokungeniswa kwesimangalo. Ukuba ithuba lamkelwe, ukujongwa kwe-BWC yonyanzeliso kuya kwenziwa lula phantsi kweliso lamagosa.
Ukuba umtyholwa okanye ummeli wakhe osemthethweni ucela ukujonga ukubonwa kwe-BWC, oku kunokuqhutywa.
2.9 Uphononongo kunye noPhicotho
Abaphathi bamagosa baya kuba nokufikelela kwi-BWC ebonisa ukuphononongwa kokuthotyelwa kweenkqubo kunye nemigangatho yeKhamera yeWall Worn. Isicelo se-BWC siya kuvelisa 'iisampulu' ezingacwangciswanga zokutshekishwa ngabaphathi bamagosa rhoqo okanye ngemfuno.
Ukukhutshwa kweNqanaba leVidiyo yeWall-Worn Video
IGosa eliPhetheyo lingakhupha imifanekiso ye-BWC eluntwini ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya:
Ukukhangela abarhanelwa abafunwayo
Ukufumana abantu abasindileyo okanye ababeshiweyo elugcinweni
• ukhuseleko loluntu
2.11 Ukulungiswa / UkuBekwa kwakhona endaweni
Xa i-BWC ifuna ukulungiswa okanye ukutshintshwa ngenxa yomonakalo, igosa elinike ikhamera kufuneka lazise umphathi wabo. Isuphavayiza kufuneka iphande, kwaye sele iqinisekisile, isuse ikhamera ekusebenzeni. Ukuba i-kiWK ye-BWC, isikhululo sedokodo okanye isoftware ayisebenzi njengoko kufanele, xela umba kumphathi. Isuphavayiza kufuneka iphande kwaye sele iqinisekisile, yazise umthengisi. Ukuba yonke inkqubo yokusebenza ayisebenzi, qaphela ukumiswa kokusetyenziswa kwekhamera de kube ukungasebenzi kakuhle kulungisiwe kwaye nenkqubo ibuyele kwimeko yokusebenza. Iindawo zokutshintsha ze-BWC kunye / okanye iinkqubo ziyafumaneka ngokuqhagamshelana nomthengisi we-BWC ngokusebenzisa umphathi.
I-Protocol yengozi eyiyo
1. Isiganeko esibuhlungu esenzelwe le SOP nasiphi na isenzo samapolisa okanye isenzo esithe ngqo okanye ngokungathanga ngqo sokonakalisa ukwenzakala emzimbeni okanye ukusweleka kwelungu lesebe kunye / okanye ummi.
2. Kwimeko yesigameko esinobuzaza, amalungu anikwe ikhamera enxibe umzimba ayakwenqaba ukujonga idatha erekhodiweyo de kufike icandelo lophando elinoxanduva lophando.
3. Ukuba isigameko esibalulekileyo siphandwe yiarhente yangaphandle, umphandi okhokela iarhente yangaphandle uya kwenza isigqibo ukuba igosa elibandakanyekayo liya kuvunyelwa ukujonga idatha erekhodiweyo.
4. Ukuba isigameko esibalulekileyo siphandwe lisebe, inkosi yamaPolisa, okanye umphathi wakhe, uya kwenza isigqibo ukuba igosa elibandakanyekayo liya kuvunyelwa ukujonga idatha erekhodiweyo.
5. Eli candelo alingawenqamli amalungu kwizigameko ezinobuzaza ngokujonga okurekhodiweyo kweekhamera ezinokuncedisa kuphando olukhoyo ngoku (umzekelo, iinkcazo zomsolwa, izithuthi zomsolwa, indlela yokuhamba, njl. Njl.).
6. Ukuba kukho ii-BWC ezisetyenziswayo ngexesha lesigameko esibuhlungu, umphathi wamapolisa abelwe kwi-Ofisi yoPhando kunye ne-Intelligence Bureau kwaye engabandakanyekanga kwisiganeko esithile esibucayi uya kuthatha ugcino lwendalo kuyo nayiphi na i-BWC enokuthi ibambe isigameko kwaye ibasondeze kufutshane isithili samapolisa apho umphathi ofanana naye uya kulayisha ngokukhawuleza kwiEvidence.com ngokubeka isixhobo sekhamera kwisikhululo sokuchaja / sokukhuphela ikhamera.
8491 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-7 Namhlanje